Palette eyeshadow, sety borosy eyeshadow, Concealer fanafody tsara indrindra - Joyo
INGREDIENTS an'ny CUSTOMA, FORMULA ARY NY ANTSIKA
Azontsika atao ny mamolavola raikipohy arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa, izay misy Matte, shimmer, glitter, metallic, potser press, multichrome, kojakoja sns ... Ny palette eyeshadow rehetra dia mety tsy misy habibiana sy vegan.
FAMONJANA FANAVOTANA CUSTOM
Manohana ny fametahana fonosana amin'ny fitaovana samihafa izahay: palety baoritra, paleta plastika, boaty hazo, misy asan'ny andriamby sns sns. Ary manolotra marika manokana izahay, mamorona marika manokana miaraka amin'ny sary famantarana anao.
Teknolojia fanontana CUSTOM
Manolotra UV, Pirinty vita amin'ny landy, Embossing, fanosehana mafana sns ..
MANAO TOKO BRUSH
Namboarina manokana ny lokon'ny volon-tratra, volomaso, ferrule, tahony ary fonosana.
JOYO © Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Tsorakazo Concealer, Lokom-bolo namboarina, Fanasongadinana voajanahary, Lipotra Mini, Loko lokomena tsara indrindra, Gosera Vegan, Vokatra rehetra